MASHRUUCA & WARKA |
Mashaariicda & Wararka
Nalalka guud ee qurxinta
Nalalka qurxinta ee gaarka ah
UL waxay taxeen Nalalka Filament-ka
Swag warshad ...
UL ES cinwaanka 20, Cinwaanka 24 an ...
Shadeyn cusub oo cusub
MASHRUUCA & WARKA
Laambadda muraayadda muraayadda sabaynaysa-Roob barafaysan
Algorithm waa muujinta maansada xisaabta ee dabeecadda. Naqshadeynta nalka ee Toan nguyen ， waa koox xiddig caalami ah oo umuuqda inay dhex sabeynayaan meel sida shimbiro adhi ah, ama roob qabow qabow ah. qorshuhu wuxuu bixiyaa halabuur aan dhammaad lahayn oo laambadaha wareega lagu hakin karo d ...
Laydhka toosan ee toosan oo leh S14s iyo S14d ayaa laydh toosan laambad toosan leh
Asal ahaan, S14s (laba biin), iyo S14d (hal biin) waa naqshad loogu talagalay muraayadaha waaweyn qaarkood. Caadi ahaan, waxaa jira 300mm, 500mm, iyo 1000mm oo loogu talagalay S14s (laba biin), iyo S14d (hal pin) laambad toosan, dhammaantoodna waxay noqon karaan nooc cad iyo nooca opal. Halkan waxaan ku taxay waxqabadkayaga iyo aqoon isweydaarsiga ...
Ku noqo guluubka ugu horeeya ee Edison ku dabaji guluubka quruxda saafi ah
Sannadkii 1809-kii, hal-abuure Englisg Humphry Davy ayaa abuuray nalkii ugu horreeyay ee koronto. Wuxuu xirxiray ulaha laga sameeyay dhuxusha, nooc ka mid ah walxaha kiimikada kaarboon, iyo batteriga leh laba fiilooyin. In kasta oo iftiinku uusan sii dheerayn, waxay muujisay in qalabka qaarkood ay noqdeen kuwo aad u kulul oo ay dhalaalaan marka korantada pa ...
Sidee iftiinka UV u shaqeeyaa
Kahor intaadan ka jawaabin su'aashan bal arag waxa loo yaqaan UV Lighting. Marka hore, aan dib u eegno fikradda UV. UV, ama ultraviolet, ama ultraviolet, waa mawjad elektromagnetic ah oo leh dherer u dhexeeya 10nm iyo 400nm. UV ee kala duwanaanta mowjadaha kala duwan ayaa loo qaybin karaa UVA, UVB iyo UVC. UVA: dhererka dhererkiisu waa ...
Iftiiminta khaaska ah ee cad iyo dhamaadka sare iyo dareenka raaxada
Guri, dhisme, waxaan ku arki karnaa midab cad meelkasta ha taalo, derbi cad, dabaqa marmar cad, tiir cad. Si kastaba ha noqotee, caddaanku wuu ka duwanaan karaa, kana duwanaan karaa qoto dheerda midabka, caddaan saafi ah, caddaan ah, caddaan ah, matte caddaan ah, caddaan siman ah. Maanta, waxaan ka wada hadli doonnaa sababta matte caddaanku u doorbidaan naqshadeeyayaasha ....
Jadwalka Nalalka ee loogu talagalay Chicago Hotel
Huteelkani wuxuu ku yaal magaalada buuq badan ee Chicago. Kani waa diiwaanka lacagta. Marka ugu horeysa ee aad soo gasho, waxaad dareemi doontaa inaad gashay meel kale. Waxaa jira qaabab yar oo fudud oo warshadeed, shumacyo yaryar, nalkaan diiranna waa xasilloon yahay oo madhan yahay. Tani waa geeska maqaayada hudheelka ...